CLASS-10 सकेर के गर्ने? - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिनCLASS-10 सकेर के गर्ने?
१० औं बोर्ड परीक्षा व्यक्तिको भविष्य र समाजको संरचना गर्नको लागि माइलखुट्टी नै साबित बन्छ। तसर्थ, १० औं पछिको छनौट स्पष्ट पार्नको निम्ति भविष्यको लक्ष्यहरूको आधारमा, आवश्यक सहयोग र संसाधनहरूको उपलब्धताका आधारमा चुन्ने गर्नुपर्छ। तपाईँको छनौट तपाईँको रुचीसँग मेल खान्छ भने तपाईँलाई प्रत्येक कष्टमा पनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सशक्त बनाउनु पर्ने हुनुपर्छ। सही पाठ्यक्रम छान्नु अघि तपाईँ निम्न बुँदाहरूमा स्पष्ट हुनुपर्छ –
कमल भूजेल, रिसर्च स्कलर, फिजिक्स विभाग, मिजोराम युनिभर्सिटी
कुनै पनि समाजको विकासमा शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। वौद्धिक प्रगतिले समाजलाई अन्य मूल-धारामा भएका सभ्यताको साथ उच्च स्तरमा पुर्‍याउँछ। कुनै पनि स्थानको नागरिकको जीवन स्तरले नै त्यस स्थानको शिक्षाको स्तर झल्काउँदछ। अहिले मूख्य रूपमा शिक्षाको निजीकरणका कारण शिक्षाको वास्तविक सार नै खाड़लमा परेको छ।
एउटा समय थियो जब शिक्षा एक व्यक्तिको सर्वाङ्गीन विकासको लागि प्राप्त गर्न वा वास्तवमै एक सच्चा मानव सिर्जना गर्न आर्जन गर्दथिए। तर अब यो केही पेसामा जानका लागि एक माध्यम मात्र बनेको छ र ६ भन्दा बढी अङ्क भएको तलब (6 digited salary) प्राप्त गर्ने विशेष प्रवृत्ति सेट भइरहेको छ।
हाम्रो जस्तो पिछडिएको समाजमा, अधिकांश एलिट वर्ग (Elite Class) पहिलो पुस्ता हो, जसले सधैं आफू मात्र अघि बढ्न खोज्छ सम्पूर्ण समुदायलाई उदासीन संसारमा पछाड़ी छोड्दै। यसैकारण हामीलाई शिक्षामा “सामूहिक विकास” (मास-अप-लिफ्टमेन्ट) चाहिएको छ एकल व्यक्तिको मात्र होइन। एकल व्यक्ति धेरै फलदायी हुन सक्दैनन् किनकि तिनीहरू प्राय: नै समाजबाट टाढ़ा जान्छन् र आफ्नै समाजलाई डोऱ्याउनुको सट्टा अरु उन्नत समाजसँग मिसिएर बस्छन्।
शिक्षा कहिल्यै अन्त नहुने प्रक्रिया हो, तसर्थ “गरीबहरूका लागि गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नु अवसरको रूपमा भाग्यमा मात्र हुनु हुँदैन तर उनीहरूकोमा यससम्म पुग्ने अधिकार नै हुनुपर्दछ”। एकै समयमा एकजना राम्रो मानिस र एक राम्रो पेशेवर हुनु अब कठीन काम नै भइसकेको छ। यहाँ रोजगारीको अभाव भएका कारण मानिसहरू आफ्नो रुची विपरीत काम गर्न बाध्य छन्। बेरोजगारी, रोजगारीमा-असन्तुष्टि, कामको भार सबैमाथि नै एक असल मानिस र स्वस्थ समाजको विकास निर्माणको भर पर्दछ। त्यसो भए, सही पेशा छनौट गर्नु जीवनको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक मोड़ हुन्। हाम्रो समाजको सन्दर्भमा सही मार्गदर्शन बिरलै पाउने गरिन्छ। त्यसो भए, दूर-दृष्टिको संस्कृति हामी बीचमा विकास गर्नुपर्दछ। सबै समस्या र कठिनाइहरू हुँदा-हुँदै पनि हामीले सही लक्ष्यलाई लक्षित गर्नु नै पर्ने हुन्छ।
१) तपाईँको विषयको उपलब्धता
२) पेशागत अवसरहरू,
३) परम्परागत पाठ्यक्रम वा नव-व्यवसायिक र
४) समग्रतामा तपाईँको रुची जसले इञ्जिनलाई तान्दछ।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले १० औं कक्षा पछि पाठ्यक्रम विभाजित गरेको छ (केही बोर्डहरू अपवाद राख्दै) जसमा मुख्यत: मानविकी (कला), विज्ञान र वाणिज्य र डिप्लोमाहरु। तपाईंको उद्देश्यको आधारमा, तपाईंले विशेष धारा (स्ट्रीम) चयन गर्नु पर्छ।
कक्षा १० पछि उपलब्ध विभिन्न धाराहरु (Stream)
विषयहरू गणित (Mathematics), भौतिक विज्ञान (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry), जीवविज्ञान (Biology), कम्प्युटर (Computer), अर्थशास्त्र (Economics), र सांख्यिकीका (Statistics) साथमा अङ्ग्रेजी र एक स्थानीय भाषा जुन तपाईं बोर्डमा प्रयोग गर्नुहुन्छ र भाषा प्रणालीमा निर्भर गर्दछ।
परम्परागत पाठ्यक्रमहरूको लागि तपाईँ बी.एस.सी.(B.Sc.), एम.एस.सी.(M.Sc.), एम.फिल (M.Phil.), पी.एच.डी (Ph.D.) र पोस्ट डक (Post-Doc) सबै स्ट्रीमबाट ‍+२ पछि जान सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईं इञ्जीनियरिङ (Engineering) वा मेडिकल (Medical) छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
ईञ्जीनियरिङको लागि विषय संयोजन (पीसीएम-PCM) र मेडिकलको लागि (पीसीबी-PCB) हुनेछ र विशेष प्रवेश परीक्षाहरू (JEE-Joint Entrance Examination for Engineering & NEET-National Eligibility Entrance Test for Medical) १२ कक्षा पछि आयोजित गरिन्छ।
IIT, NIT अनि AIMS ड्रीम इन्स्टिच्युट हुन्। विज्ञानसँग अधिक विकल्पहरू छन् जस्तै तिनीहरू एनडीए (NDA-National Defence Academy) प्रवेश परीक्षा बस्न सक्छन्, मानवीयता र वाणिज्यमा स्ट्रिम परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ। यसले अन्य प्राविधिक र डिप्लोमा पाठ्यक्रमहरूको अवसरहरू प्रदान गर्दछ। बी.एस.सी. नर्सिङ (B.Sc.Nursing), बी-फार्मा (B.Pharma) र अन्य प्राविधिक (Technical) पाठ्यक्रम १२ कक्षा पछि चयन गर्न सकिन्छ।
विषयहरू व्यवसाय अर्थशास्त्र (Business Economics), लेखा (Accountancy), व्यवसाय अध्ययन (Business Study), व्यवसाय कानून (Business Law) हुन्। साथै लेखा (Accounting), लेखा परीक्षा (Auditing), आयकर (Income Tax), मार्केटिङ (Marketing) र सामान्य व्यापार अर्थशास्त्रको (General Business Economics) आधारभूत ज्ञान पनि प्रदान गरिनेछ। अनिवार्य भाषा विषयहरू त्यहाँ सामान्य रूपमा हुनेछ।
जो संख्या (Numbers), वित्त (Finance) र अर्थशास्त्र (Economics) मा मोहित छन् तिनीहरूले यो धारा रोज्नको लागि उत्तम हुनेछ। यो बजार विश्लेषणमा धेरै आश्वासनदायी छ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कम्पनी सचिव, लेखाकार, व्याङ्किङमा लगानी र वित्तीय सल्लाहकारहरू जस्ता सरकारी र नीजि दुवै क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा कार्य गर्न सक्नेछन्।
१२ औं कक्षा पूरा गरेपछि सम्बन्धित धारामा पेशेवर प्रशिक्षणहरूको (Professional Training) लागि भर्ना गर्नुपर्नेछ। यसमा बीकम (B.Com), बीबीए (BBA-Bachelor of Business Administration), बीएमएस (BMS-Bachelor of Management Studies), बीबीएम (BBM-Bachelor of Business Management), सीएफए (CFA-Chartered Financial Analyst), सीए (CA-Chartered Accountant), सीएफपी (CFP-Certified Financial Planner) आदि पर्छन्।
यी बाहेक कसैले परम्परागत पाठ्यक्रम रोज्न सक्छ अनि शिक्षण र अनुसन्धान जारी राख्न सक्छ। यहाँबाट कला स्ट्रीममा सर्न सकिन्छ तर विज्ञानमा सकिँदैन।
इतिहास (History), भूगोल (Geography), भाषा (Language), सङ्गीत (Music), कला (Art), राजनीति विज्ञान (Political Science), मनोविज्ञान(Psychology), समाजशास्त्र (Sociology), मानवशास्त्र (Anthropology), मानव संसाधन (Human Resources), अर्थशास्त्र (Economics (गणितको साथ अर्थशास्त्र प्राथमिकता) अन्य विषयहरू जस्तै जर्नलिज्म (Journalism), मास मेडिया (Mass Media), धर्म अध्ययन(Religion Study), अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन(International Studies) जो नयाँ उब्जिँदै गरेका विषयहरू हुन् जसको +२ स्तरमा पनि पढ़ाउने सङ्केत पाइन्छ।
यूपीएससी/ U.P.S.C. (संघ लोक सेवा आयोग- Union Public Service Commission) अन्तर्गत प्रतिष्ठित सिभिल सेवा परीक्षाको तयारीको लागि मानविकी सबैभन्दा बढ़ी रुचाइन्छ। यो कुनै पनि अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाको तयारीमा धेरै उपयोगी हुन्छ। विज्ञान र वाणिज्यमा जस्तै यसबाट पनि पारम्परिक पाठ्यक्रम जारी राख्न र शिक्षण औ अनुसन्धान शुरु गर्न सक्दछ। यस बाहेक अधिकांश बुद्धिजिवीगण, चिन्तकहरू, दार्शनिकहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरू मानविकी पृष्ठभूमिबाट नै उम्रने गरिन्छ।
कक्षा १० पछि अन्य पाठ्यक्रमहरू
व्यावसायिक पाठ्यक्रमहरू (Vocational courses):
रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमहरू जस्तै ईन्टीरियर डिजाइनिङ, फायर र सेफ्टी, साइबर कानून, गहना डिजाइन, फेशन डिजाइन, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, वेब डिजाइनिङ आदि।
पोलिटेक्निक कोर्सहरू (Polytechnic Courses):
टेक्निकल कोर्समा डिप्लोमा प्राप्त गर्न सकिन्छ र प्रवेश परीक्षा मार्फत प्राविधिक (Technical) डिग्री कोर्सहरूको दोस्रो वर्षमा प्रवेश पाउन सकिन्छ किनकि पोलिटेक्निकमा पढ़ाइने विषय इञ्जीनियरिङमा पनि एउटै समान हुने गर्दछ। पोलिटेक्निक कोर्सको लागि सामान्य अवधि १० कक्षा पछि ३ बर्ष लाग्ने गर्दछ। यसमा विषयहरु इञ्जीनिरिङको सित प्राय: समान नै पाइन्छ।
भारत सरकारले उच्च शिक्षाको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि उज्ज्वल विद्यार्थीहरूलाई धेरै आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदान गर्दछ। ती मध्ये इन्स्पायर (INSPIRE-Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) र KVPY (Kishore Vaigyanik Prothsahan Yojna) डीएसटी (DST-Department of Science and Technology) भारत सरकारले दिएको राष्ट्रिय फेलोशिप हो।
यस कार्यक्रमको उद्देश्य विद्यार्थीलाई प्रतिभा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नु हो। उनीहरूको शैक्षिक क्षमता बुझ्न उनीहरूलाई मद्दत गर्नुहो। उनीहरूलाई विज्ञानमा अनुसन्धान नै पेशा बनाउन प्रोत्साहन दिनुहो र देशमा अनुसन्धान र विकासको (Research & Development) लागि उत्तम वैज्ञानिक दिमागको विकास सुनिश्चित गर्नु हो। यसको चयन राष्ट्रीय स्तरको कड़ा स्क्रीनिङ परीक्षणको माध्यमबाट गरिन्छ।
निष्कर्ष: यो सानो लेखमामा सबै विवरण समायोजित गर्न गाह्रो कार्य हो। फलत: यो एउटा डोऱ्याउनु खोज्ने मार्गदर्शन मात्र हो जहाँबाट एक विशेष संकायमा प्रवेश गर्न सकिन्छ र तपाईँले आफ्नो रूचीको विस्तृत ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। तथापि १० पछि निर्णय लिनु भविष्यको लागि महत्वपूर्ण भएतापनि, तर यो नै अन्त चैं होइन र जीवनको कुनै पनि चरणमा आफ्नो आत्म-विश्वास र उत्साहको साथमा नयाँ थालनी शुरु गर्न सकिन्छ। अझ धेरै अवसरहरु छन् जो यहाँ जानकारी दिन सकिएन। प्रत्येक नागरिकहरुले सचेत भएर बाल्यकालदेखि नै नानीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने, सुझाव दिने संस्कार बसाल्नु आवश्यक छ अनि भविष्यमा अचानक आउने कठीन स्थितिसित नढल्पलाइकन लड़्न सक्षम बनाउने दायित्व सबैले लिनुपर्ने छ। अतह: कुरा बिग्रिसकेर बिलाप गर्नु वा मरम्मत्ती गर्दै कोस्नु भन्दा अगावै तयार बस्नुहोस्, रोकथाम गर्नुहोस्। भविष्य तपाईंको पर्खाईमा छ।